Deni oo kadigay nidaam doorasho oo dagaal sokeeye horseeda - Tilmaan Media
Deni oo kadigay nidaam doorasho oo dagaal sokeeye horseeda
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay wado qorshe halis ah oo lagu marin habaabinayo doorashada ka dhaceysa dalka, isagoo caddeeyay in nidaamka hab qeybsiga 4.5 laga dhigato Dastuuri.
Waxaa uu sheegay heshiiskii 2016 dhexmaray Puntland iyo dowladda Federaalka lagu go’aamiyay, in aan mar dambe dib loogu laaban doorasho ku salaysan nidaamka 4.5, isagoo caddeeyay in haddii lagu laabto hannaanka 4.5 inuu dalka dib ugu celin doono khilaaf siyaasadeed iyo colaad keenta isku dhacyo hubeysan.
Saciid Deni ayaa sheegay in aysan suura gal aheyn in hey’ado ku yimid nidaam 4.5 inay ka taliyaan masiir kama dambeys ah, maadaama ay ku yimaadeen heshiis iyo is afgarad.
Deni Madaxweynaha Puntland ayaa soo dhaweeyay hadalkii uu golaha wasiirada u jeediyay Raysal-wasaaraha DFS xasan Cali Khayre kaas oo la xiriira in la qabanayo doorashada Waqtigeeda.
Trump oo ku hanjabay inuu howlgelinayo milatari rabshadaha soo afjara